Qorshaha qoraalka emailka ah ee waxtarka leh
Posted by Tranquillus | Jan 4, 2019 | Xirfadaha hadalka iyo qoraalka afka
Email ayaa muddo dheer ahaa qalab lagama maarmaanka u ah isgaarsiinta ganacsiga, laakiin baadhitaan ay samaysay Sendmail. Waxay muujisay in ay sababtay xiisad, jahawareer ama cawaaqib kale oo xun oo ku wajahan 64% xirfadlayaal.
Sidaa darteed, sidee ayaad uga horjoogsan kartaa email-kaaga? Iyo sidee u qori kartaa emails oo bixiya natiijooyinka la rabay? Maqaalkani, waxaan dib u eegeynaa xeeladaha aad isticmaali karto si loo hubiyo in isticmaalka emailkaagu yahay mid cad, wax-ku-ool ah, oo lagu guuleysto.
Shaqaale celcelis ahaan xafiiska wuxuu helayaa 80 emails maalin. Iyada oo mugga boostada, farriimaha shakhsiyadeed si fudud ayaa loo illoobi karaa. Raac sharciyadan fudud si e-mailkaaga loo ogaado oo loo isticmaalo.
Ha u gudbin farriin fara badan.
Isticmaal shay wanaagsan.
Fariin cad oo kooban.
Noqo mid daacad ah.
Dib u akhri.
Ha u gudbin farriin fara badan
Mid ka mid ah ilaha ugu weyn ee walaaca shaqada ayaa ah tirada macaamiisha dadka hela. Marka, ka hor intaadan bilaabin qorista email, is weydii naftaada, "Ma dhab baa lagama maarmaan?"
Marka la eego macnaha guud, waa inaad isticmaashaa taleefanka ama rasmiga rasmiga ah si aad u xallisid arimaha laga yaabo in lagu soo rogo jawaab celin. Isticmaal qalabka qorshaynta isgaadhsiinta iyo aqoonsiga jidka ugu haboon ee noocyada farriimaha kala duwan.
Mar kasta oo suurtagal ah, sii warka warka shakhsi ahaaneed. Waxay kaa caawinaysaa inaad la xiriirto naxariis, naxariis iyo faham iyo inaad naftaada is furto haddii fariintaada si qaldan loo qaato.
Isticmaal shay wanaagsan
Cinwaanka joornaalku wuxuu leeyahay laba hawlood: wuxuu kaa hayaa dareenkaaga oo kuu soo koobayaa maqaal si aad u go'aansato inaad akhriso iyo haddii kale. Mawduuca fariintaada e-mailka waa inaad sameysaa isla sidaas.
Shey maran waxay u badan tahay in la iska indho tiro ama loo diido "spam". Markaa had iyo jeer isticmaal dhawr kelmadood oo si wanaagsan loo doortay si aad ugu muujiso qaataha waxa ku jiraemail.
Waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad ku darto taariikhda mawduuca haddii fariintaada ay qayb ka tahay emayl caadi ah oo joogto ah, sida warbixinta mashruuca todobaadlaha ah. Fariin u baahan in wax laga qabto, waxaad sidoo kale ku dari kartaa wicitaan ficil ah, sida "Fadlan ka hor November 7."
READ Sidee guul looga gaaraa qaabkeeda?
Qeybta mawduucsan ee qoraalka ah, sida kan hoose, waxay bixisaa macluumaadka ugu muhiimsan iyada oo aaney helin xitaa haddii ay furan tahay emailka. Tani waxay u adeegtaa martiqaad ah oo xasuusinaysa dadka qaata kulankooda mar kasta oo ay soo booqdaan koodhkooda.
Tusaale xun Tusaale fiican
Mawduuc: Kulanka Mawduuca: Kulanka GATEWAY - 09h 25 Febraayo 2018
Fariimo ku hayso oo kooban
Emails, sida waraaqaha dhaqdhaqaaqa dhaqameed, waa inay ahaadaan kuwo cad oo kooban. Ka dhig erayadaada gaaban oo sax ah. Maydka emailka waa inuu ahaadaa mid toos ah oo wargelin ah, wuxuuna ku jiraa dhammaan macluumaadka khuseeya.
Si ka duwan sida waraaqaha dhaqameed, diro emayl badan oo badan maaha mid ka badan mid soo diraya. Sidaa darteed, haddii aad u baahatid inaad la xiriirto qof ku saabsan dhowr mawduucyo kala duwan, tixgeli inaad qorayso email gaar ah mid kasta. Tani waxay caddaynaysaa farriinta waxayna u oggolaaneysaa wariye inuu ka jawaabo hal maado mar.
Tusaale xun Tusaale wanaagsan
Mawduuc: Wareegida warbixinta iibka
Waad ku mahadsantahay inaad soo dirtay warbixintan warbixintii hore. Waxaan akhriyay shalay waxaanan dareensanahay in cutubka 2 uu u baahan yahay macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan tirooyinkeena iibka. Waxaan sidoo kale u maleynayaa in tone uu noqon karo mid rasmi ah.
Intaa waxaa dheer, waxaan rabay in aan kuu sheego in aan jadwalkaan jadwalkan kulan kula yeeshay waaxda xiriirka dadweynaha ee ololaha xayeysiiska cusub. Waxay joogtaa 11h00 waxayna ku jiri doontaa qolka shirarka yar yar.
Fadlan, ii sheeg haddii aad heli kartid.
Waad ku mahadsan tahay,
Waad ku mahadsantahay inaad soo dirtay warbixintan warbixintii hore. Waxaan akhriyay shalay waxaanan dareensanahay in cutubka 2 uu u baahan yahay macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan tirooyinkeena iibka.
Waxaan sidoo kale u maleynayaa in tone uu noqon karo mid rasmi ah.
Miyaad wax ka beddeli kartaa fikradaha maskaxda ku haysa?
Waad ku mahadsan tahay shaqadaada adag!
(Camille ayaa markaa soo diraya email kale oo ku saabsan kulanka PR.)
Waa muhiim in halkan laga helo isku dheelitirnaan. Uma baahnid inaad qof ku qarxiso emayl, macnona waa inaad isku darsataa qodobo badan oo la xiriira hal boostada. Markay tani dhacdo, ka dhig mid fudud sadarrada nambarada ah ama dhibcaha rasaasta, oo tixgeli "u kala qaadista" macluumaadka qaybo yaryar, si wanaagsan loo abaabulay si ay ugu fududaato dheefshiidka.
Sidoo kale xusuuso in tusaalaha sare ee kor ku xusan, Camille waxay sheegtay waxa ay rabto Michelin si ay u sameeyaan (kiiskan, badalida warbixinta). Haddii aad dadka ka caawiso inay ogaadaan waxaad rabto, waxaa jira fursad wanaagsan oo ay ku siin doonaan.
Noqo mid daacad ah
Dadku waxay inta badan ka fikiraan in emails ay noqon karaan mid aan rasmi ahayn xarfaha dhaqameed. Laakiin fariimaha aad u dirto waa fekerkaaga xirfad-yaqaanada, qiimaha iyo fiirada faahfaahinta waa muhiim, sidaas darteed heerar gaar ah ayaa loo baahan yahay.
Haddii aanad shuruudo fiican la lahayn qof kale, iska ilaali luqadda aan tooska ahayn, slang, jargon iyo habaabin aan habooneyn. Muujiyeyaasha waxay ku caawin karaan inay caddeeyaan ujeedadaada, laakiin waxaa ugu wanaagsan inay u isticmaalaan dadka aad si fiican u taqaan.
Farriintaada ku dheji "Si daacadnimo leh", "Maalin wanaagsan / fiidkiow" ama "Kuugu fiican," kuna xiran xaaladda.
Qaadayaasha waxay go'aansan karaan inay daabacaan emails oo ay la wadaagaan dadka kale, markaa had iyo jeer noqo mid anshax leh.
Marka aan la kulanno dadka wejigooda wejiga, waxaan isticmaalnaa luqadooda jirka, dhawaaqyada dhawaaqa, iyo sheekooyinka wajiga si loo qiimeeyo sida ay dareemayaan. E-mail ayaa naga reebaysa macluumaadkaan, taas oo micneheedu yahay inaanaan ogeyn marka ay dadku si qalad ah u fahmeen fariimahayaga.
Xulashada ereyada, dhererka jumlada, xarakada iyo xarfaanta ayaa si sahlan loo fahmi karaa iyada oo aan la helin tilmaamo muuqaal iyo maqal ah. Tusaalaha koowaad ee hoos ku qoran, Louise wuxuu u maleynayaa Yann inuu jahwareerayo ama xanaaqayo, laakiin dhab ahaan, wuxuu dareemayaa wanaag.
Waxaan u baahanahay warbixintaada ka hor 17 maanta ama waxaan maqnaan doonaa waqtigayga.
Waad ku mahadsantihiin shaqadaada adag ee warbixintan. Miyaad i siin kartaa nuqul ka hor saacadaha 17, si aanan u seegin waqtigii loo qabtay?
Ka feker "dareen" ee emailkaaga dareen ahaan. Haddii ujeedadaada ama shucuurtaada laga yaabo inay si qalad u fahmi karto, raadso hab aan qarsooneyn oo ah sameynta erayadaada.
Ugu dambeyntii, ka hor intaadan gujin "Dirid", qaado daqiiqad si aad u hubiso haddii emailkaaga ku jiro higgaad, naxwaha iyo khaladaadka calaamadaha. Email-kaaga ayaa ah qayb ka mid ah sawirkaaga xirfadeed sida dharka aad xiran tahay. Sidaa daraadeed waa la foorarsaday si ay u soo diraan farriin ay ku jiraan faallooyin taxane ah.
Inta lagu jiro caddaynta, fiiro gaar ah u leh dhererka emailkaaga. Dadku waxay u badan tahay in ay akhriyaan emails gaaban, oo ka badan muddo dheer, emails la xiray, sidaas u hubso in emails aad u yar sida ugu macquulsan, iyada oo aan laga reebin macluumaadka lagama maarmaanka ah.
Qodobbo muhiim ah
Inteena ugu badanna waxaan ku qaataan qayb wanaagsan oo ka mid ah maalmaheenna at aqriyaan oo qoraan emayl. Laakiin fariimaha aan dirno waxay jahwareer ku noqon karaan kuwa kale.
Si aad u qorto emails wax ku ool ah, marka hore weydii haddii aad runtii u isticmaali karto kanaalkan. Mararka qaarkood waxaa laga yaabaa inay ku fiicnaadaan in la qaato telefoonka.
Waraaqahaaga ku dhaji khabiir iyo sax. U dir dadka keliya ee runtii u baahan in la arko iyaga oo si cad u tilmaamaya waxa aad jeclaan lahayd qofka qaataha ah inuu sameeyo xiga.
Xasuusnow, emails-kaagu waa fekerkaaga xirfad-yaqaankaaga, qiyamkaaga, iyo faahfaahinta faahfaahinta. Isku day in aad qiyaasto sida dadka kale u tarjumi karaan farriinta farriintaada. Noqo mid daacad ah oo had iyo jeer hubi waxa aad soo qorto ka hor intaanad gujin "dir".
Qorshaha qoraalka emailka ah ee waxtarka leh May 10th, 2020Tranquillus
horeMuhiimadda mawduuca mawduuca ee emayl xirfadeed
socdaXasuusinta muuqaalka cybercourtoisie
Marxaladda qabyada ah in si fiican loo qoro
Sidee loogu qancin karaa goob shaqo?
Sidee guul looga gaaraa qaabkeeda?